WOWOW Bronze Centerset Bridge Kitchen Faucet 4 Hole miaraka amin'ny Sprayer Side -
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucet an-dakozia an-dakozia / WOWOW Bronze Centerset Bridge Kitchen Faucet 4 Hole miaraka amin'ny Sprayer Side
WOWOW Bronze Centerset Bridge Kitchen Faucet 4 Hole miaraka amin'ny Sprayer Side
[Fananganana varahina mafy】 Ny faucet tetezana mavesatra dia vita amin'ny varahina mafy ary milanja 7.76 Ibs. Ny fantsom-bozaka an-dakozia vita amin'ny varahina miaraka amin'ny faran'ny Brown Bronze dia harafesina, harafesina, mahazaka rano, ary miantoka ny fiarovana ny rano sy ny androm-piainana lava.
[Serivisy ho an'ny mpanjifa】 Lakozia tetezana 8 mirefy mankafy fiverenana voafetra 90 andro sy fiantohana 5 taona. Raha misy ny fanontaniana momba ny faucet tetezana varahina, azafady aza misalasala mifanerasera aminay, dia faly izahay manolotra vahaolana
Na mila lakozia misy aingam-panahy avy any Victoria ianao na toerana misy lohahevitra 1950, ny famolavolana tetezana Retro dia safidy tena ankafizinao amin'ny fananganana lakozia na trano fidiovana vita amin'ny lamaody.
fomba: Style A-misy famafazana sisiny
Color: Bronze volontsôkôlà
Spout Height: 6.3 santimetatra
Tonga any amin'ny Spout: 7 santimetatra
endri-javatra: Tanana 2, faucet 8-inch
Lavaka ilaina: 2
Amin'ny alàlan'ny fanerena bokotra, ny sprayer amin'ny lafiny varahina avo lenta dia afaka manondraka rano mikoriana mafy hanadiovana lovia sy loto ao an-joro. Ny fantsom-panafahana tafiditra ao dia hatramin'ny 59 santimetatra, mora diovina ny toerana rehetra manodidina ny fantsakana.
High Arc Spout miaraka amin'ny ABS Aerator
Ny aerator avo lenta dia manome fikorianana malama ary mamonjy rano 50%.
Tsy misy rano mafy sy mizana.
Ny aerator dia azo esorina, izay mora diovina na soloina.
Ny fikasihan-tanana malefaka amin'ny rantsantanana hanaisotra ny refy sy ny kalsioma.
Faucet mihodina 360 ° misy tahony 2
Tanan-tsolika 2 ho an'ny fifehezana mora foana ny mari-pana sy ny habetsahan'ny rano.
Volavola fihodinan'ny Arc 360 ° avo, mety tsara ho an'ny dobo roa sy lavabos.
Faucet an-dakozia Centerset Bridge 8-santimetatra mety ho lavaka 2.
Faucet varahina matevina
Fitaovana mafy varahina, mora ny fikojakojana, fitoniana avo lenta, fiainana maharitra.
Hamarino ny fahasalamana sy ny fiarovana ny rano mitete tsirairay
Faucet Bronze Brown
Famaranana tsara tarehy vita amin'ny varahina volontsôkôlà volom-borona, fisehoana volo amin'ny alàlan'ny famirapiratra ambany nefa tsara tarehy.
Famolavolana miolaka tsy manam-paharoa, spout Victoria mahery, samy manana ny lazany sy ny maha-azo ampiharina.
Fampiharana: lakozia / koveta / lakozia / hotely
Ampahany : 23115A1A Sokajy: Faucet an-dakozia an-dakozia, Fitaovana an-dakozia
Havia / Havanana
WOWOW Chorme amin'ny vilany famenon'ny vilany ara-barotra